Microsoft mechara kwado POP3 na Outlook Mobile | Gam akporosis
Outlook na anata POP3 nkwado naanị afọ iri atọ e mechara ya
Taa, anyị nwere ọtụtụ akụrụngwa ma a bịa n'ịbanye na akaụntụ email anyị, mana ọ dịbeghị anya, yana yana akaụntụ email ndị ọkachamara, ị ga-ahọrọ n'etiti POP3 na IMAP. Ugbu a ọ dị na Outlook Mobile mgbe Microsoft kwadoro POP3.
Ya mere, anyị ga-abanye data ntuziaka, ọ bụ ezie na taa n'ime akụkọ banyere ụlọ ọrụ ndị anyị kwesịrị ime otu ihe ahụ, nke mere na na POP3 data ahụ ka na-akwado ebe obibi, ebe na IMAP ọ na-edebe ya na sava ahụ.
Ihe na-atọ ọchị banyere ikpe a bụ na, mgbe ihe niile dị na sava, Microsoft na-aga n'ụzọ ndị ọzọ ma kwado POP3 na Ekwentị mkpanaka. Ma ọ bụ na taa ọtụtụ ọrụ email na-akpọghachi Exchange ma ọ bụ IMAP maka mmekọrịta nke ozi.
Ihe kpatara ya bụ n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ site na nke anyị gara gụọ igbe akwụkwọ ozi email anyị, ya mere, a ga-edebe ozi ịntanetị ndị a na sava iji nwee ike ịnweta ha ozugbo.
N'adịghịkwa IMPA, POP3 na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otu a ozi ndị ị gụrụ na-ebudata na ngwaọrụ ahụ ewepụ ya na sava ahụ. Ofzọ nke ịrụ ọrụ nke na-aga nke ọzọ karịa ka a na-atụ anya ya taa mgbe anyị banyere onye ahịa ozi anyị site n'ọtụtụ ebe.
Gịnị POP3 eAnọla m na Outlook Mobile ka ọ dịrị na ọrụ ndị ahụ ebe IMAP anaghị arụ ọrụ, ha nwere ike ịnweta protocol ahụ etinye dị ka otu n'ime mgbakwunye ọhụrụ na ndị ahịa email a karịa nke ọtụtụ nde mmadụ na-eji.
Ya mere, ewepu imata ihe di iche na IMPA na POP3, ị nwere ike ịnwale nke abụọ protocol na ngwa maka ekwentị anyị nke na-arụ ọrụ zuru oke na n'oge na-adịbeghị anya wetara ọchịchịrị mode.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Outlook na anata POP3 nkwado naanị afọ iri atọ e mechara ya
Cleaner Lite bụ ngwa ọhụrụ nke Xiaomi iji mee ka ekwentị gị dị ọcha karịa mkpọrọhịhị